Gudoomiye waaxedyada G/Banaadir oo bil walba lacag shaqsiyaad madaxtooyada Katirsan ka qaatan XOG CULUS! – War La Helaa Talo La Helaa
Gudoomiye waaxedyada G/Banaadir oo bil walba lacag shaqsiyaad madaxtooyada Katirsan ka qaatan XOG CULUS!
By shaaca	 Last updated Aug 9, 2018
Baaris muddo dheer aan wadnay kadib waxaan ku ogaanay in Gudoomiye waaxedyada Degmooyinka Gobalka Banaadir dhamaan lacago laalush ah aay ka qaatan shaqsiyaad ka hoos shaqeeya Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Mid kamid ah Gudoomiye waaxedyada Degmooyinka Magaalada Muqdisho, oo naga codsaday in aan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan ayaa sheegay in bil walba laga qaado lacag dhan 500$ shan boqol Dolar isaga oo sidoo kale xusay in dhamaan Gudoomiye waaxedyada oo dhan sidaas oo kale loogu qaato.
Gudoomiye Waaxedyada Degmooyinka Muqdisho, dhaqaalaha laga qaado ayaa ku xiran dhaqaalaha laga qaado Degmooyinka aay ka shaqeeyan iyadoo degmooyinka dhaqaalaha badan aan laheyn laga qaado lacag dhan 200$ Boqol dolar iyadoo Gudoomiye waaxedkii diida loogu hanjabo in xilka laga qaadayo maadama raga lacagahaasi ka qaata Madaxweyne Farmaajo la shaqeeyan.
Gudoomiye Ku Xigeenka Amniga iyo Siyaasada Gobalka Banaaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax oo adeegsanaya Farxaan Xuseen Iyo Nuuradiin Maxamed Doob, oo kamid ah Habmaamuska Madaxweyne Farmaajo ayaa dhaqaalahaasi si toos ah ugu qaata Gudoomiye Waaxedyada Xaafadaha Muqdisho iyaga oo u furtay akoon gaara, si bil walba-aay u wadaagan dhaqaalahaasi sida Musuq maasuqa ugu soo xarooda.
Madaxda Dowladda Fedaraalka oo mar walba ku celiya in aay la dagaalamayaan Musuqa,Masuuliyiin kamid ahna loo xiray Musuq maasuqa, ayaa waxaay u muuqata in shaqsiyaadka Madaxtooyada sida tooska ugu xiran sida Madaxweyne Farmaajo oo kaliya in loo ogol yahay in aay laalush ka qaatan.
Mas’uul ka tirsan Xukumadda R/wasaare Kheyre oo Is Casiley!
Xildhibaan Sagal Biixi si yaableh ugu hadashay qaraarka xukuumadda Kheyre ee xiisadda Sacuudiga iyo Kanada!